Bagcine begxila ebhizinisini lejusi yezithelo obesekuyisikhathi eside bezama ukuchuma kwezamabhizinisi kungalungi. Omunye wabo uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UMnu uLungelo Mgaga, omunye wabasunguli beLoxion Fruits Beverages, yaseGoli, eGauteng
BAKHULE bengabangani baze banquma ukuqala ibhizinisi lokukhangisa imikhiqizo yasezitolo ngo-2013. Ukungachumi kahle kwalelo bhizinisi kwenze balishiya phansi baqhubeka neminye imisebenzi ukuziphilisa.
Baphinde bahlangana futhi ngo-2019 baqala ibhizinisi lokudla, nalo langachuma ngenxa yokusebenza kwabo ngokuqhelelana. Loko kwaphinde kwaholela ekutheni bame kancane besahlela ukuthi bazokwenza kanjani ukuze liphumelele.
Ukuvalwa kwezwe ngenkathi kuhlasela iCOVID-19 kubanike ithuba lokuqala kabusha. OMnu uLungelo Mgaga noPatrick Thokkie, baseGoli, eGauteng, basungule iLoxion Fruits Beverages, eyenza ijusi eyenziwe ngezithelo.
UMgaga uthe: “Bese kukaningi sizama ukuchuma kwezamabhizinisi kodwa kungenzeki. Ngo-2019 sengisebenzela iClover, (yilapho) engiqale khona ukuthanda imikhiqizo yeziphuzo ezihlukene ngoba besisebenza ngayo nsuku zonke.
“Ngibe sengithinta umngani wami uThokkie ngamtshela ngomcabango waleli bhizinisi, savumelana ngokuliqala, nokuthe sisanda kuliqala saphelelwa wumsebenzi ngenxa yeCOVID-19, asangabe sisabamba siyeka, sabona kuyisikhathi esifanele sokugxila kulona ngokugcwele,” kulanda yena.
UMnu uMgaga nabalingani bakhe uMnu uThokkie noMnu uThwala
Uthi baqale bedayisa ijusi yabo emizini yabantu behambela nasemadolobheni aseGoli, nokuyilapho abathole khona inqwaba yamakhasimende. Manje sebenama-warehouse amabili eSoweto nase-Orange Farm.
“Ngokubona umsebenzi ukhula siqashe uMnu uThabo Thwala, uMnu uSiphesihle Mdluli nomfowethu uMfanafuthi Mgaga, esisebenzisana nabo ukuqhuba ibhizinisi,” kuqhuba uMgaga.
Ijusi yabo ibiza uR30 ilitha noR15 u-500ml.
Izinhlobo zejusi yeLoxion Fruits Beverages
“Abantu bayithanda kakhulu kangangokuthi kuyenzeka sidayise amabhodlela awu-50 ngosuku kanti futhi iyatholakala ezitolo zaselokishini nasezindaweni zokudla ezihlukene eGoli namaphethelo,” kusho uMgaga ngeqholo.
Nokho kuyo yonke le mpumelelo sebeke babhekana nezinselelo. Uthi: “Sekuke kwenzeka saqondana namakhasimende athatha imikhiqizo yethu engabe esakhokha ngesikhathi. Siphinde sibe nenkinga yabantu abasithembisa izulu nomhlaba bagcine bengasisizanga ngalutho ukufukula ibhizinisi.”
“(Nokho) ukuqonda ukuthi sifunani, ukusebenza kanzima nangokubambisana ngaso sonke isikhathi kwenza singapheli moya ezikhathini ezizamazamisa ibhizinisi lethu,” kusho uMgaga.
Uthi bafisa ukuthola izinkampani ezizobaxhasa ukuze badlondlobale ngokushesha, umkhiqizo wabo ungagcini ngokutholakala eGoli namaphethelo kuphela kodwa ukwazi ukufinyelela eNingizimu Afrika yonkana nasemhlabeni jikelele.
Facebook: Loxion Fruits Beverages